Taageerada Su'aalaha ⚙️ | ThatsLuck.com
►Waxaan soo degsaday softiweer, laakiin ma isticmaali karo astaamo qaar, waayo? Barnaamijyada waxaa lagu soo dejiyaa si bilaash ah, qaarna gebi ahaanba waa Bilaash, kuwa kalena waa in lagu shaqeyaa lambar. Si aad u ogaato sida loo helo a lambarka hawlgelinta akhri bogga ►Dukaameysi Faq.
HaveWaxaan lumiyay koodhkii hawlgelinta ee softiweerka, miyaan ku codsan karaa emayl ahaan? Xeerarka waxqabadka waxay ku jiraan buugaagta Kindle ee lagu iibiyo Amazon, codsiga waa in markaa si toos ah loogu diraa taageerada Amazon.
►Waxaan soo degsaday softiweer laakiin Windows ayaa iiga digaya inay khatar noqon karto, waayo? Barnaamijyada ThatsLuck kulligood waa badbaado oo 100% fayras waa ka xor, ma haystaan ​​shahaadooyinka ay u baahan tahay Microsoft si aysan u soo bandhigin digniinahaas (shahaadooyinkan waa la bixiyaa), waxaa dhici karta in bilowgii ugu horreeyay ee barnaamijku u muuqdo digniinta sidoo kale loo yaqaan "smartscreen".
Xaaladdan oo kale, guji kaliya sheyga "Macluumaad Dheeraad ah" ka dibna ku qor "Si kasta oo ay tahay".
Fayraskeyga antivirus wuxuu ku ogaaday Trojan barnaamijka, waayo? Sidii horeba loo qoray, dhammaan barnaamijyada ThatsLuck waa 100% fayras la'aan. Si kastaba ha noqotee, in lagugu cadaadiyo kombiyuutar isku duba ridaya fuliyaasha si loo yareeyo cabirkooda sidaas darteedna loo dedejiyo soo degsashada, waxaa dhacda in antibiyootiko bilaash ah (gaar ahaan Avast) ay soo saaraan digniin been ah, xayiraan ama gabi ahaanba ka tirtiraan faylka kombiyuutarka. Xaaladdan oo kale waxaan kugula talinayaa inaad bedesho fayraska. waa aamin, waa la xaqiijiyay oo waa la xaqiijiyay. ThatsLuck.com AAN waxaa ku jira Trojans, spyware, virus ama waxyaabo kale oo waxyeelayn kara kombuyuutarkaaga. Haddii aad gujiso xiriirka soo socda waxaad ka hubin kartaa kan warbixinta amniga loo soo saaray ThatsLuck.com Dal ►Warbixinta Google Transparency.
Ka dib markii aad bilawday barnaamijkan fariintan qaladka ah ayaa soo muuqata, waayo?
Dhammaan barnaamijyadu waxay u baahan yihiin xiriir internet oo firfircoon si ay u shaqeeyaan, farriintan qalad 1784 waxay muujineysaa in isku xirnaanta shabakadu ay maqan tahay ama aad u gaabis tahay, iska hubi oo isku day inaad dib u bilowdo softiweerka.
Miyaan ku isticmaali karaa barnaamij barnaamijkayga 'Mac' ah? Barnaamijyada ThatsLuck - haddii aan si kale loo cayimin - waxaa loo kaydiyaa sida 32/64 xoogaa yar oo fuliyayaal ah oo Windows ah. Jawaabtu sidaa darteed waa maya, hase yeeshe kama reebi karo iyadoo la adeegsanayo emulatorka Windows-ka ee Mac inay si ammaan ah u shaqeyn karaan.
Maxay yihiin shuruudaha ugu yar ee lagu fulin karo barnaamijyada? Waxay kala yihiin sidan soo socota: PC leh Windows 7 ama ka sareeya nidaamka hawlgalka, 2 GB wan, shaashad leh xallinta ugu yar 1366 × 768.
►Barnaamijka roulette-ka ee aan soo dejiyey oo aan dhaqaajiyey ma gujinayo sidii loogu baahnaa miiska casino, sidee baan u hagaajin karaa? Tani waxay ku xirnaan kartaa arrimo kala geddisan, hase yeeshe labada xal ee had iyo jeer shaqeeya waa in la bilaabo barnaamijka "maamul ahaan". Si tan loo sameeyo, guji kaliya faylka la fulin karo oo leh badhanka midig ee midig oo dooro ikhtiyaarka "maamulo maamule". Shay kale aad muhiim u ah waa in galka barnaamijka ku yaalo on desktop oo aan waligood ku jirin xididka diskiga weyn ee adag (badanaa C :), halkaasoo, tusaale ahaan, galka Windows sidoo kale ku yaal.
Have Waxaan haystaa laba kombuyuutar iyo laptop, miyaan ku isticmaali karaa barnaamijka kumbuyuutarradeyda oo dhan? Haa dabcan, haddii aad rabto sidoo kale waad wareejin kartaa oo si toos ah uga bilaabi kartaa pendrive USB-ka kumbuyuutarka aad dooratay.
Anigu ma haysto akhristaha buugaagta shidan, sidee baan u akhrin karaa buugga si aan u helo koodhka hawlgalka? Haddii aad isticmaasho PC ama Mac, waad soo dejisan kartaa ►Barnaamijka bilaashka ah ee Amazon loogu talagalay kombuyuutarkaaga / Tablet / Smartphone labadaba iOS iyo Android.
Miyaad helin jawaabta aad raadineysay? ► ila soo xiriir iyo wixii ka sareeya oo dhan iska qor ►YouTube ee loogu talagalay horudhaca barnaamijyada soo socda!